यो म ठूलो भएपछिको पहिलो गीत: ‘नाच फिरिरी’ का गायक महेश काफ्ले (भिडियो सहित) – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsKollywoodयो म ठूलो भएपछिको पहिलो गीत: ‘नाच फिरिरी’ का गायक महेश काफ्ले (भिडियो सहित)
यो म ठूलो भएपछिको पहिलो गीत: ‘नाच फिरिरी’ का गायक महेश काफ्ले (भिडियो सहित)
September 3, 2018 Tulasa Karki Kollywood, Music, Video 0
नायिका स्वस्तिमा खड्का र निश्चल बस्नेत अभिनित म्युजिक भिडियो ‘नाच फिरिरी’ले युट्युबमा कीर्तिमान कायम गरेको छ।
युट्युबमा अपलोड भएको ३७ दिनमै एक करोडपटक हेरिने गीतको पहिलो नम्बर सूचीमा परेको छ। सबैभन्दा छोटो समयमा ‘नाच फिरिरी’ एक करोडपटक हेरिने गीतको सूचीमा परेको हो।
अहिले सम्मको नेपाली गीतहरूमा सर्वाधिक हेरिएको गीत ‘कुटुमा कुटु’ ले ४९ औं दिनमा करोड क्लबको खाता खोलेको थियो। त्यस्तै यसअघि भाइरल भएको हेमन्त रानाको गीत ‘सुन साइँली’ले दुई महिनामा एक
करोड भ्युज् पाएको थियो। प्रकाश घिमिरे र क्रिस्टल क्लाउज डान्स क्रिउको साथमा नायिका स्वस्तिमा खड्का र निश्चल बस्नेतको जोडीलाई प्रस्तुत गरिएको यस गीतका गायक, संगीतकार तथा गीतकार महेश काफ्ले हुन्।
महेश लोक तथा दोहोरी गायक भोजराज काफ्लेका छोरा हुन्। ‘आमा रातो सारी चुरापोते किन नलाको ?’ गीतका गायक दिनेश काफ्लेका भाइ महेश काफ्लेले ‘सानीमा मार्देऊ बरु बगाइदेऊ पानीमा’, ‘जुवा तासैले’, ‘सडक बालक’ जस्ता सामाजिक सन्देशमूलक गीत गाएर लोकप्रिय भइसकेका बालगायक हुन्।
हाल काठमाडौंको कोटेश्वरमा बुवा भोजराज काफ्ले, दाइ दिनेश काफ्लेसँगै बस्ने गरेका महेश काफ्लेसँगको कुराकानीः
महेश जी, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ?
अहिले त म घरमै छु। तपाईंले फोन गर्दा भर्खरै उठेर ब्रेकफास्ट गर्दै छु।
तपाईँको गीत ‘नाँच फिरिरि’ ले बजारमा तहल्का पिटिरहेको छ त?
(हाँसो)अँ, अलिअलि हुँदैछ। राम्रो काम गर्ने हाम्रो प्रयास रहेको थियो। दर्शकहरूले माया गरिदिनु भएको छ। गीत रिलिज भएको ३७ औं दिनमा करोड क्लबमा पुग्दा खुसी लागिरहेको छ।
यो गीतमा निश्चल र स्वस्तिमालाई अभिनय गराउने भन्ने सोंच कसको हो?
खासमा यो गीत तयार हुँदै थियो। अनि मैले मेरा साथी आकाशलाई यसको डमीदेखि नै सुनाएको थिएँ। पछि फाइनल भएसँगै आकाशले लगेर आसिफ शाह दाइलाई सुनाउनु भयो। अनि आसिफ दाइले फेरि निश्चल दाइलाई सुनाउनु भयो। निश्चल दाइलाई गीत सुन्नेबित्तिकै मन परेर राम्रो लाग्यो भन्नु भयो। हामीले पनि त्यही मौकामा दाइलाई प्रस्ताव राख्यौं। दाइले हुन्छ नि त कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर भनिहाल्नु भो। निश्चल दाइले सहज रूपमा हाम्रो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर गीतमा उहाँहरूलाई राख्न सफल भयौं।
तपाईं त लोकगायक भोजराज काफ्लेको छोरा। तपाईं आफैले पनि बाल्यकालमा ‘सानीमा मार्देऊ बरु बगाइदेऊ पानीमा’ जस्ता लोकगीत गाउनुभएको थियो। अनि यस्तो फरक धारको गीत बनाउँदै गर्दा बुवाको प्रतिक्रियाचाहिँ के थियो?
मैले बुवालाई सुनाएको थिएँ। बुवाले सुन्नु भयो तर, केही प्रतिक्रिया दिनु भएन। सायद यो फुच्चेले पनि के–के गर्छ? यसले गरेको यस्तो गीत पनि के गीत भन्ने खालको लाग्यो होला! किनकि बुवाको अगाडि हामी त जहिले पनि सानै हो नि! त्यसमाथि हामीले सानोमा दाइ दिनेश काफ्ले र मैले बुवाको संगीतमा गीत गाएका छौं। उहाँले खासै मन पराउनुभएको जस्तो लागेन मलाई।
तपाईं बालगायककै रूपमा हिट भइ सक्नुभएको मान्छे। ठूलो भएपछिको सायद यो पहिलो गीत हुनुपर्छ?
हो, यो मेरो ठूलो भएपछिको पहिलो गीत नै हो। दाइको गीत ‘आमा रातो सारी चुरा पोते किन नलाको’ पछि मैले ‘सानीमा मार्देऊ बरु बगाइदेऊ पानीमा’ जस्ता गीतहरू गाएँ। जुन गीत तत्कालीन समयमा हिट भयो। एकदमै रुचाएको गीत थियो। यस बीचमा मेरो र दाइको सांगीतिक शिक्षादीक्षा र अरू पढाइले पनि कामहरू भइरहेको थिएन। अहिलेचाहिँ मैले यो गीत निकालेको हो।
तपाईंले त गीतको जनरा नै चेन्ज गर्नु भएछ त?
होइन। गीत म सानैदेखि सबै प्रकारको सुन्थें। अर्को कुरा, बुवा नै लोक तथा दोहोरी गीतको नाम चलेको कलाकार भइ सक्नुभएको थियो। अब सानोमा बुवाले हाम्रा लागि जस्तो गीत बनाइदिनुहुन्थ्यो त्यस्तै गीत गाउने त हो। मलाई सबै जनरामा काम गर्न मन छ।
त्यसो भए त घरमै सांगीतिक माहोल बनेको रहेछ। बुवा, दाइ र तपाईं तीन जना नै मिलेर फेरि त्यो ‘आमा रातो सारी चुरा पोते किन नलाको?’ शैली वा त्यस्ता लोकप्रिय प्रोजेक्ट गर्ने सोंच छैन?
अहिलेसम्म त छैन। बरु तपाईंले भन्नु भएपछि चाहिँ केही सोच्नु पर्लाजस्तो पो लाग्यो!
तपाईंलाई भोजराज काफ्लेको छोरो, बालगायक नै हो भनेर कतिले चिन्नु हुन्छ?
खासै चिन्नु हुन्न। किनकि त्यो गीतको जनरा र अहिलेको गीतको जनरा नै फरक छ। अर्को कुरा, त्यतिबेला म सानै थिएँ। स्वर पनि अर्कै थियो। अहिले ठूलो पनि त भएँ नि! (हाँसो)
गीतको छायांकन गर्ने क्रममा निश्चल बस्नेत, आसिफ शाहलाई भोजराज काफ्लेको त्यही बालगायक छोरो हो भनेर चिनाउनु भएको थिएन?
थिएन। अर्को कुरा, त्यस्तो माहोल नै थिएन। मलाई चाहिँ सुरुमै म फलानो भनेर चिनाउनु भन्दा पनि कामले चिनून् र पछि आफ्नो परिचय जोडिँदा पनि अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हत्तपत्त म भनिहाल्दिनँ। यही गीत फाइनल भएपछि युट्युबमा हाल्ने बेला महेश काफ्ले भनेर खोजी गर्दा पुराना गीत देखेर मलाई चिन्नु भयो। नेपालखबरबाट साभार
भारतीय गायिकाले गायिन नेपाली गीत ! हेर्नुहोस भिडियो
जान्नुहोस ! बलिउडका यी कलाकार र क्रिकेटरबीचको सम्बन्ध (फोटो फिचर)